LADM - Naqshad Qaas u ah Maamulka Dhulka Dhulka - Kolombiya - Geofumadas
Ogast, 2016 cadastre, Featured, egeomates My
Soo-koobidda soo-jeedinta ay sameeyeen Golgi Alvarez iyo Kaspar Eggenberger oo ka dhacay shirkii Andean Geomatics ee Bogotá, bishii Juun 2016.
Shuruudaha Cadastar Sare
Iyadoo la hirgelinayo Qorshaha Horumarinta Qaranka 2014 - 2018 iyo abuurista Wakaaladda Qaranka ee Dhulalka ANT, dhulgariirka Dhulka ee Colombia ayaa si isdabajoog ah wax uga beddelay isla markaana wuxuu soo saaray waxyaabo cusub oo loogu talagalay dhismaha siyaasadda cadawga sida ay yihiin :
Awood-baahinta Kastamka iyo wafdiga awoodda leh ee heer gobol,
Dibad-baxidda fulinta hannaanka aasaasiga ah iyo dayactirka cadastoolka.
Si loo gaaro isku xirnaanta xogta horey u soo baxday ee ku saabsan xogta macluumaadka ee Cadastre iyo Registry,
Mashruuca The casriyaynta maamulka Land ee Colombia, maalgeliyey Iskaashiga Swiss ah (SECO) taageertaa hababka kala duwan oo la xidhiidha dhul siyaasadda, oo ay ku jirto taageero dhismaha maamulka dalka Guntin ah qaabka guud ee ICDE ah, ee taageero habeyn hay'adaha iyo jaheeyo ee IGAC ku saabsan doorka cusub sida mid amar cadastral, xoojinta talada siyaasadda cadastral-Diiwaanka waayo qaabka tixraaca geodetic iyo taageero xaqiijinta aragtida cadastre badan loo.
Nidaamka cusub ee qaabka iyo nidaamka tiknoolajiyadda, ansixinta Istaandarada Maareynta Caalamiga ah ee Caalamiga ah ee loo yaqaan ISO-19152 ayaa la bilaabay; Waan ogahay LADM (Model Land Domain Domain). Isku-darka istaandarkan ayaa u oggolaanaya isu-dheellitirka u dhexeeya cadaadiska ka dhashay soo-jeedinta tikniyoolajiyadda iyo dalabaadka adeegyada ay u qabaan muwaadiniinta arrimaha ku saabsan maamulidda dhuleed iyadoo la raacayo hanaan isku-dhafan.
Xilligan, qaabka koowaad ee qaabka ugu muhiimsan ee LADM ayaa la dhisay, kaas oo ku habboon sharciyada Colombia oo ay ku jiraan qaabka ugu yaraan:
Xisbiyada danaynaya, waxay yihiin kooxahan, shaqsiyaadka, hay'adaha sharciga iyo shaqsiyaadka dadweynaha ee ku xiran silsiladda maamulka ee xuquuqda dhulka,
Waaxyaha maamulka ee matalaya agabyada kala duwan ee dhulalka, labadaba kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha.
Liiska Xuquuqda, Mas'uuliyadaha iyo xayiraadaha ka dhex jira alaabta dhuleed iyo hantida diiwaan gashan Diiwaanka Hantida.
Qeybaha munaasabka ah iyo sifooyinkooda, kuwaas oo ku jira xogta cadawga ee hadda jira, taas oo lagu kicin doono duuliyeyaasha Muhiimka ah ee Cadawtarka si loo fuliyo dhowaan.
Ansixinta 'LADM' waxaa sidoo kale ka mid ah taageerida Kaabayaasha Xogta Mabaadiida ee Kolombiya (ICDE), iyada oo loo marayo abuuritaanka Node Maamulka Dhulka, kaas oo u adeegi doona aasaaska wadajirka ee walxaha loo qaabeeyey xudunta. Si tartiib tartiib ah, hay'adaha kala duwan ayaa ula qabsan doona LADM hawlahooda, iyagoo dammaanad qaadaya tixraaca gaarka ah ee alaabada, xuquuqda, dadka iyo canshuuraha oo ka kooban mashiinnada Nidaamka Maareynta Dhulka Qaranka ee Kolombiya.
INTERLIS si loo fuliyo
Mid ka mid ah qalabka loo adeegsanayo hirgelinta LADM waa INTERLIS. Kani waa luqad gaar ah oo loogu talagalay sharraxaadda moodooyinka xogta juqraafiyeed, oo leh qaab wareejin iyo qalab taxane ah oo leh ansaxinta, is-dhexgalka, maareynta macaamilka iyo cusbooneysiinta macluumaadka lagu gaari karo hab maamuusyo wada-shaqeyn ah.
A dhawaan horumariyo farsamo tababarka ka hay'adaha kala duwan oo ku lug leh mashruuca ku saabsan isticmaalka INTERLIS for Tusaale, oo wuxuu hormariyey version a of model LADM Colombia luqaddan.
Duulimaadyada Cadawga Badan ee Muhiimka ah
Mashruucu wuxuu taageerayaa Machadka Juquraafiga Agustín Codazzi (IGAC) iyo Kormeeraha Guud ee Diiwaangelinta Qaranka (SNR), dhismaha qaabka, qeexitaannada farsamo iyo habraacyada lagu horumarinayo Duuliyeyaasha badan ee Cadastre. Tan waxaa ka mid ah hirgelinta bakhaar lagu keydiyo xogta cadastral iyo diiwaanka; iyadoo la adeegsanayo aalado softiweer oo bilaash ah oo fududeynaya dhismaha, tafatirka iyo daabacaadda xogta, iyo sidoo kale aalado loogu talagalay ansaxinta xogta laga soo saaray fulinta howlaha dibadda.
Intaa waxaa dheer, qalab farsamo iyo waxqabad aan loo baahneyn ayaa loo diyaarin doonaa hawlaha kala duwan ee geedi socodka beeraha iyo xafiiska baaritaanka guryaha.
Iyadoo loo marayo habka hirgelinta habka saxda ee Colombia ee LADM, lagu qeexay INTERLIS, qandaraaslayaashu waxay haysan doonaan qalab lagama maarmaan u ah inay diyaariyaan iyo gaarsiinta macluumaadka laga soo uruuriyay goobta sida ku xusan tusaalaha heerka sare ee aan soo sheegnay ee istaandarka ISO 19152. IGAC iyo SNR ayaa heli doona aaladaha lagu xaqiijiyo, lagu xakameeyo laguna keydiyo macluumaadka iyo dukumiintiyada natiijada tijaabada, si loo soo saaro casharadii la bartay. iyo in la hagaajiyo habka loo qiimeeyo wax soo saarka sahaminta cadastral.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Mashruuca http://www.proadmintierra.info/
Post Previous" Hore Hirgelinta LADM iyadoo la adeegsanayo INTERLIS - Kolombiya
Post Next Bentley Systems dhawaaqday finalka la waxyoonay 2016Next »